Obodo kacha mma na Morocco ileta | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Afrika, General, Morocco
Morocco dị ezigbo nso na Europe, na North Africa, mana anyị ghọtara na ọ bụ mba dị iche iche, dị nso na otu oge ahụ. Omenala ha, ndi ha, na agba ha, isi na-esi ísì ụtọ, bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị na-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche, yabụ ịgagharị na obodo ukwu ya ga-adị mma maka onye ọ bụla.
Mgbe anyị na-ekwu maka nke kacha mma Obodo Moroccan ileta Anyị na-ezo aka na ndị kachasị ewu ewu, ọ bụ ezie na enwere nkuku pụrụ iche nke bara uru ịhụ, dịka ebe niile. E wezụga Marrakech enwere obodo ndị mara mma dịka Rabat ma ọ bụ Fez, nke nwere ọtụtụ ihe iji nye ndị njem nleta maka ahụmịhe ọhụụ.
Marrakech bụ isi obodo oge ochie, obodo hiwere na 1602 site na Ibn Tasfin, na ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ otu n'ime obodo ndị kachasị adọrọ mmasị na nke na-enweta ọtụtụ njem nleta kwa afọ. O doro anya na enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ na ya, iji kpoo ọdịnala Moroccan, ụdị ndụ ya, uwe ya, ngwaahịa na ọdịnala ya. Nleta Souk bụ ihe dị mkpa, ebe ahụ enwere ntakịrị ihe ịzụrụ, yana ebe ndị ahịa ga-anwa ị nweta ọnụahịa kachasị mma site na ịbanye na ndị njem nleta. Na Jamaa el Fna square ị pụrụ ịnụ ụtọ ma ehihie na abalị peculiar odide, na-egosi na nri ụlọ ahịa. Mosquelọ alakụba Koutoubia bụ ihe ncheta kachasị ama ama, nke sitere na ụlọ elu Giralda, nke bụkwa ụlọ alakụba na mbụ, yana nke ya na ya yiri.
Onye ọ bụla maara Casablanca site na ama ama Humphrey Bogart, mana taa obodo a bụkwa nke kachasị ukwuu na Morocco na otu n'ime ebe akụ na ụba ya. Ọ bụ obodo dị iche iche nke oge a, nke kachasị mma iji hụ akụkụ kachasị ugbu a nke Morocco. N'agbanyeghị oge a, na Casablanca enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ. Na medina ma obu obodo ochie Ọ dị n'akụkụ ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, n'ime ya ị nwere ike ịzụta ngwaahịa ndị a na-ahụkarị, dị ka ngwaahịa akpụkpọ anụ. Enwekwara ụfọdụ ihe mmasị, dị ka ụlọ elekere elekere ma ọ bụ ụlọ alakụba Ould el Hamra. N'ime obodo nke obodo anyị na-ahụ ụlọ ụlọ ịchọ mma mara mma, ị gaghị echefu nnukwu ụlọ alakụba Hassan nke Abụọ, nke dị oke ọnụ na nke oge a.
Rabat bụ isi obodo ugbu a, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị abụ ebe kachasị njem na Morocco. Obodo a nwere ngwakọta zuru oke n’etiti obodo ochie na nke oge a, ya mere ọ bụkwa ebe na-atọ ụtọ ileta. A ga-ahụ bụ Hassan Tower, a minaret nke Almohads wuru, abụghị nke ama dịka Giralda ma ọ bụ Koutoubia, kama ọ dịkwa mkpa. Ihe ozo kwesiri ihu bu kasbah nke Udayas, ebe mara oke nma nke obodo nwere obere uzo na ulo eji acha anụnụ anụnụ.
Na Tangier enwere ọtụtụ ebe ị ga-ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị chọrọ ịbịaru nso na ebe kachasị atụ, anyị ga-ahapụ obodo ahụ iji chọpụta oghere ndị sitere n'okike. Na Cape Spartel na Caves nke Hercules Ha bu ndi amara aha uwa nile, n'ihi na onye obula maara silhouette nke ọgba nke nwere odidi nke Afrika. Na Cabo Spartel enwere echiche mara mma na ụlọ mposi mara mma, yana ebe ị ga-a aụ ihe ọ drinkụ drinkụ n'ihu oké osimiri. Laa azụ n'obodo ahụ, ị ​​ga-aga gburugburu Plaza 9 de Abril, ebe enwerebu ahịa ochie. N'ime obodo a, anyị nwekwara ike ịchọta osisi karịrị 800 afọ, na ubi Mendoubia, wee fuo na mpaghara medina, ebe souk dị na ebe ị nwere ike ịhụ akụkụ kachasị nke obodo ahụ, yana okporo ụzọ ndị dị warara na ndụ ndị bi na ya.
Obodo gbara osimiri okirikiri dị na Ọwara Osimiri Agadir, bụ nnukwu obodo dị na ndịda Morocco. Otu n'ime isi ihe na-atọ ụtọ bụ ịgagharị, ebe anyị nwere ike ịnụ ụtọ ụsọ osimiri na ụlọ ahịa na ụlọ nri na gburugburu ebe obibi na nke oge a. Ebe ihu igwe dị na mbara igwe, ọ ga-ekwe omume ịnụ ụtọ n'ụsọ osimiri na oke osimiri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ niile, yana ọ dịkwa ụsọ mmiri kilomita asaa. Ọ bụrụ na anyị na-amasị ịzụ ahịa, nleta a na-atụ aro bụ Souk el Had, nke nwere ọtụtụ puku obere ụlọ ahịa ị ga-efu.
Obodo a bụ ahụmịhe na-enweghị atụ maka ọtụtụ ndị njem nleta na-achọ ibi ndụ dị iche na ọdịbendị ọdịda anyanwụ ya. Ọ bụrụ na na Marrakech ị ga-ahụ obodo ọgbara ọhụrụ, ihe kariri West, na Fez ọ dị ka anyị ga-alaghachi n'oge gara aga, ya na ndị ọrụ aka ya, souks ya na okporo ụzọ ochie ya. Na Chouwara tannery Ọ bụ otu n'ime onyonyo a kacha mara amara nke obodo Fez. Nnukwu olulu ndị ahụ nwere agba okike ndị a na-ewebata akpụkpọ ahụ bụ ihe nkiri nke onye ọ bụla chọrọ ịhụ, n'agbanyeghị ajọ isi nke mpaghara ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Obodo kacha mma na Morocco ileta
Njem ịga Barbados, ala Rihanna